Oneပြီလ ၁၉ ရက်တွင် HTC One M19 စတင်ရန်စီစဉ်ထားသည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည် Androidsis
ကောင်းပြီ၊ Aprilပြီလမှာငါတို့မှာအထူးတယ်လီဖုန်းနှစ်လုံးရောက်လာလိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ် မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့တွေ့ဆုံခဲ့သည် Aprilပြီလ ၆ ရက်ကို Huawei မှ၎င်း၏ P6 ကိုစတင်ရန်ရွေးချယ်သောနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။HTC One M10 အတွက်ဖြစ်နိုင်သည့်ရက်စွဲ.
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က HTC One M10 ၏အချို့ပုံရိပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အချိန်တွင်ဤ filter @evleaks နှင့် @onleaks ကဲ့သို့သောအခြားသူများမှလည်းစမတ်ဖုန်းအသစ်များအကြောင်းသတင်းပို့ရန်သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာသည်။ @evleaks မှနောက်ဆုံးပေါ်တွစ်တာတစ်ခုအရ HTC One M10 သည်ဖြစ်လိမ့်မည် Aprilပြီလ 19 ဖြန့်ချိခဲ့သည်.
HTC သည် HTC One M10 ဖြင့် Android ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးလိုအပ်သည်ကိုငါတို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကလုံလောက်တဲ့ထက်ပိုပြီးပါလိမ့်မယ် အခြားအ flagship မှအလေးအနက်ပြိုင်ဘက်ရှိသည်နှင့်အခြားဒီဇိုင်းများအတွက်အခြားလိုင်းများယူဆောင်လာရန်အခြားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဖြင့်ထိတွေ့စေလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်း၏အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးတွင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
One M10 ကနေငါတို့သိတယ် ၎င်းသည်သတ္တုကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်, လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာနှင့် USB Type-C ။ ယခုအချိန်တွင် HTC သည်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုကြေငြာရန်လိုသည်။
အ သတင်းများ ယခုအချိန်အထိဤအရာများသည်
၅.၂ လက်မ (5,15 x 1440) Quad HD AMOLED မျက်နှာပြင်
16/32/64 GB သိုလှောင်နိုင်သည့် microSD ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်
dual-ton LED flash နှင့်အတူ 12.3 MP နောက်ကင်မရာ၊ Sony IMX377, Laser AF, OIS, PDAF, 4K video recording
4G LTE၊ WiFi 802.11 ac /a/b/ g / n (2.4 and5GHz), Bluetooth 4.2, GLONASS ပါသော GPS၊ USB Type-C
Un အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့Aprilပြီလ နှင့် Huawei နှင့် HTC တို့အကြား၎င်းတို့၏ထင်ရှားကျော်ကြားမှုနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC One M10 ဖြန့်ချိသည့်ရက်သည်Aprilပြီ ၁၉ ရက်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
Sergio Guerrero Lopez ဟုသူကပြောသည်
ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲငါကင်မရာကကျိုးနွံမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ငါ s7 နဲ့အတူသွားချင်တယ်
Android အတွက်ပျော်စရာနှင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဗွီဒီယိုဂိမ်း ၅ ခု